I-VIDEO: INASA isikhombisa ukuthi isizini yesiphepho yango-2017 yayinjani | Isimo Sezulu Senethiwekhi
U-2017 kube unyaka iningi lethu elizolikhumbula ngamarekhodi ahlukahlukene aphuliwe, kanye nenani lezinto ezibonakalayo kanye nokulimala kwabantu okwenzekile. Ngaphandle kokungabaza, izenzakalo ezibe nezinkanyezi kakhulu kulo nyaka esesizohamba ngazo yiziphepho zasezindaweni ezishisayo, isizini yazo e-Atlantic ezongena emlandweni ngokubunjwa kwayo iziphepho eziyishumi ezishisayo zilandelana ezikwenze kwaba yisigaba seziphepho.
Kepha bekuneminye imicimbi esingeke siyikhohlwe: njengemililo yasendle yaseCalifornia, noma ukuthi umoya wawuthwala kanjani isihlabathi usuka ehlane laseSahara usiyisa eMelika.
Iplanethi yethu izwe lapho, ungasho, ukuthi konke kuxhunyiwe. Imvamisa asicabangi ngakho, kepha okwenzeka endaweni eyodwa kungathinta umhlaba wonke. Iziphepho zase-Atlantic zakha eduze nezwekazi lase-Afrika; nokho, zithinta iMelika.
Kulo nyaka, i-2017, kube nezimbalwa ezidale umonakalo omkhulu, njenge Irma y María, efinyelele esigabeni esiphezulu esikalini sikaSaffir-Simpson. Iziqhingi zaseTropical ezinjengeDominica, eCaribbean, zazicekelwe phansi ngokuphelele. EYurophu, ikakhulukazi e-Ireland, phakathi nesonto lesibili lika-Okthoba isiphepho safika Ophelia, okuqine kunayo yonke eminyakeni engama-30 edlule.
Lezi zinto zenzeka kanjani? Ukuyikhombisa, Isikhungo seNASA iGoddard Centre sikhiphe i-video ekhombisa. Kuyo, idatha etholwe kuma-satellite phakathi nonyaka yayihlanganiswe namamodeli wezibalo kukhompyutha yokulingisa.
Umphumela uba yile vidiyo emfushane emangalisayo lapho ungabona khona ukuthi iziphepho ezinkulu zenziwa kanjani, zahamba ziphi nokuthi zagcina zinciphe kanjani. Ngaphezu kwalokho, uzokwazi nokubona ukuthi imimoya ithwala kanjani izinhlayiya ezincane zothuli, usawoti wasolwandle (ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka), isihlabathi esisuka ehlane laseSahara saya eMelika (esinsundu) nentuthu yomlilo owenziwe ePacific (empunga).
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Iziphepho » I-VIDEO: INASA isikhombisa ukuthi isizini yeziphepho yango-2017 yayinjani